I-FNB imise isikhangisi esigxekwayo | isiZulu
I-FNB imise isikhangisi esigxekwayo
I-ANCYL isola i-FNB 'ngokuvukela uhulumeni'
I-FNB ikhalaza ngeStandard Bank
I-ANCYL izoba nomhlangano ne-ANC
Cape Town - Ibhange elikhulukazi kuleli i-First National Bank, ebhekane nokugxekwa ngenxa yesinye sezikhangisi zalo, isikumisile ukusakazwa kwesikhangisi esiyiqhathe nophiko lwentsha eqenjini elibusayo.
Umbiko wabezindaba zeMail & Guardian, uthi ibhange alikhiphanga zizathu ngokumisa ukusakaza isikhangisi kanti umsakazo iRadio 702, umeme isikhulu sebhange uBernice Samuels, okhulume wathi: "Ngebhadi sikhethe ukuthi sikumise ukukhonjiswa kwesikhangisi, njengoba laba abakhuluma kuma-video besabela izimilo zabo."
Isikhangisi sebhange siyingxenye yomkhankaso webhange obizwa ngokuthi yi"You Can Help Campaign", lesi sikhangisi siveza izingane zesikole zifunda izifiso zazo ngezwe iNingizimu Afrika zigqamisa nomkhankaso webhange.
Omunye umyalezo uthi : "Izingqinamba angeke zixazululwe ngemali, ipolitiki engasho lutho, imibhikisho kanye nodlame. Zonke izinto ezinkulu esizenzizile sizenze ngokusizana."
Uphiko lwentsha lugxeke lesi sikhangisi lwathi "singukuvukela uhulumeni neqembu elibusayo".
Okhulumela i-African National Congress kuzwelonke uJackson Mthembu uthe iqembu lithukile ngesikhathi libona lesi sikhangisi, uthi iqembu nalo linezimvo ezifanayo nezophiko lwentsha.